रुपन्देही क्वार्टर फाइनलमा - विवेचना
रुपन्देही क्वार्टर फाइनलमा
November 17, 2017 541 Views
शिवसताक्षी । झापाको झिलझिलेमा सम्पन्न उक्त खेलमा गत संस्करणको उपविजेता अग्नी रुपन्देही ११ ले मोरङ ११ लाई ३–१ को गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
झिलझिलेस्थित गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको खेलमैदानमा सम्पन्न खेलको १५औं मिनेटमा मोरङले अग्रता लिएको थियो । उसको जर्सी नं. १५ का खेलाडी मनिष थापाको डिबक्स भित्रको पासलाई सदुपयोग गर्दै जर्सी नं. ११ का सुनिल खड्काले पोष्टको दिशा दिएका थिए ।
३ विदेशी खेलाडी सहित मैदानमा उत्रेको रुपन्देहीले खेलको ४७औं मिनेटमा उसका तर्फबाट जर्सी नं. ११ का अमर डंगोलले दिएको पासको सदुपयोग गर्दै जर्सी नं. ७ का विदेशी खेलाडी अबाले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए भने खेलको ७४औं मिनेटमा अबाको पासलाई कुनै गल्ती नगरी अग्रता दिलाएका थिए भने खेलको इन्जुरी टाइम ८१औं मिनेटमा जर्सी नं. ५ का खेलाडी बिजय धिमालले गरेको शसक्त प्रहार समेत गोलमा परिणत भएको थियो ।
खेलको म्यान अफ द म्याच रुपन्देही ११ का अबा भए । शनिबार दुई विभागीय टीम एपीएफ विरुद्ध त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच हुने आयोजक समितिका गणेश घिमिरेले जानकारी दिए ।
Previous अन्टार्कटिकामा बिहे गरेर विश्व कीर्तिमान
Next ज्यामिरगढीलाई पुस १० मा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता